देउवा दिल्ली गएकै दिन हतियारसहितको अमरिकी सेना काठमाडौँ आएको हो ? — Sanchar Kendra
देउवा दिल्ली गएकै दिन हतियारसहितको अमरिकी सेना काठमाडौँ आएको हो ?
रक्षाले सचिवस्तरीय निर्णयबाट ती सामग्री ल्याउन अनुमति दिएको पाइएको छ । रक्षाले अनुमति प्रदान गर्दै गृह, परराष्ट्र, अर्थ, संस्कृति तथा पर्यटन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो ।
एमसीसी पास भएसंगै नेपालमा उक्त जहाज आउनु सोहि परियोजनासंग जोडिएको भन्दै चर्चा सुरु भएको छ । एमसीसी खारेजीको माग पनि बढेको छ तर सरकारले भने कार्यान्वयनको बाटोतर्फ सम्झौता अघि बढाउने तयारी थालेको छ । केहि साना कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एमसीसी खारेज हुनुपर्ने बताउदै आएका छन् ।
फागुन १२ गते पनि उस्तै सुरक्षा कडा पारेको थियो । बिहान ११ बजेदेखि विभिन्न राजनीतिक दल एमसीसीविरुद्धमा उत्रेका अगुवाइहरूको विरोध जुलुसले बानेश्वर तातेको थियो, उता प्रहरीले सुरक्षा घेरा कडा बनाएको थियो । नभन्दै ८ गतेको जस्तै परिस्थिति फेरि फागुन १५ गते आइतबार दोहोरियो ।
प्रहरीले लाठीचार्ज, रबर गोलीदेखि अश्रुग्यास पानीको फोहरा हानेका थिए । भीड तितरबितर भयो, आन्दोलनकारीले प्रहरीलाई गुलेलीले समेत हिर्काए । उता भने सत्तापक्षले एमसीसी पास गराउन संसद्मा फागुन १५ गते १ बजे बोलाएको बैठकमा दिनभरिजसो सांसदहरूको एमसीसीको व्याख्यात्मक अभिव्यक्ति पछिपछि सोही दिन अबेर राति तनावै तनावको बीच एमसीसी अनुमोदन संसद्बाट पारित भयो ।